“सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली ,कांग्रेसमा खुसीयाली, दुई भित्रै देउवा ,अब प्रधानमन्त्री बन्लान ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली ,कांग्रेसमा खुसीयाली, दुई भित्रै देउवा ,अब प्रधानमन्त्री बन्लान ?
“काठमाडौ । सोमबारको फैसलाले नेपाली काँग्रेसमा खुशीयाली छाएको छ भने नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासलाई ठेस पुगेको छ । सर्बोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।”
“राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले हरेक कदममा प्रधानमन्त्री ओलीका साथ र सहयोग दिँदै आएकी थिइन् । उनको उक्त कदम बिरुद्ध सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।”
“प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।”
“जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।”
“जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो ।”
Previous “अदालतले देउवा,लाई डाइरेक्ट, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ : शेरबहादुर केसी (भिडियो सहित)”
Next “माधव पक्षका नेता,लाई यस्तो फैसला आएपछि….”